कतै तपाईले लगाउँदै गरेको क्रिम मृत्युको कारण त बन्दै छैन ? यसरी हुन सक्छ मृत्यु | Rajmarga
कतै तपाईले लगाउँदै गरेको क्रिम मृत्युको कारण त बन्दै छैन ? यसरी हुन सक्छ मृत्यु
आफूलाई सुन्दर देखाउन तपाई जुन क्रिम प्रयोग गरिरहनु भएको छ, कतै त्यही क्रिम तपाईको मृत्युको कारण त बन्दै छैन ? आगोको चपेटामा आएर हुने सयौ मृत्युको सम्बन्ध स्किन क्रिमसँग पनि हुन सक्दछ।
एक जना वरिष्ठ दमकलकर्मीले सचेत गराएका छन् कि छालामा लगाउने क्रिममा पैराफिन हुने गर्दछ, जसले सबैभन्दा छिटो आगो समात्ने गर्दछ । यदि तपाई क्रिमको प्रयोग दिनहुँ गर्नुहुन्छ तर ओछ्यानमा कपडा सधैं परिवर्तन गर्नुहुन्न भने क्रिममा रहेको पैराफिन कपडामा घोलिने गर्दछ । फेरि चुरोट वा हिटरको एउटै झिल्को सम्पर्कमा आउने बित्तिकै उक्त कपडामा सजिलै आगो सल्किन सक्छ ।
बीबीसीले गरेको एउटा जाँचअनुसार यो जोखिमका बावजुद क्रिमका कुनै प्याकेटमा यसप्रकारको चेतावनी पाइँदैन । औषधिको नियामक निकायहरुले स्किन क्रिमको सेफ्टी रिभ्यू गरिरहेका छन् ।
छाला रोगका लागि मात्र क्रिम प्रयोग गरौं
गत वर्ष मार्चमा बीबीसीको एउटा छानविनमा इंग्ल्याण्डमा सन् २०१० पछि भएको ३७ जनाको मृत्यु पैराफिनको उपस्थितिका कारण भएको थियो । यस्तो मानिएको छ कि नोभेम्बर २०१६ पछि पनि थप आठ जनाको यसैका कारण मृत्यु भएको छ।
दमकल सेवाले चेतावनी दिएको छ कि एक्जिम र छाला रोग भएको खण्डमा मात्र स्किन क्रिम प्रयोग गरियोस ।
वेस्ट यार्कशायर फायर तथा रेस्क्यु सेवाका कमाण्डर फायरफाइटर क्रिस बेल भन्छन्–क्रिमबाट हुने मृत्युको वास्तविक संख्या अरु बढी हुन सक्दछ ।
उनले भने–हजारौ, सयौ मानिस यसको प्रयोग गर्दछन् । हामी सटिक तथ्यांक त निकाल्न सक्दैनौ तर क्रिमका कारण आगोको चपेटामा आएर मर्नेको संख्या सयौ हुन सक्दछ।
लण्डन फायर ब्रिगेडका म्यानेजर मार्क हेजल्टनले पनि यसमा चिन्ता दोहोराए । उनले भने कि कयौ दमकल सेवासँग यस्तो फोरेन्सिक टिम पनि छैन जसले आगो लाग्नुमा पैराफिन क्रिमको भूमिकाको सही मूल्याङ्कन गर्न सकोस् ।
वेस्ट यार्कशायर निवासी ८२ वर्षीय ब्रायन बिकटको मृत्यु गत सेप्टेम्बरमा जलेका कारण भयो । भनिन्छ कि उनको चुरोचको आगो कपडामा खसेको थियो । र, उनको कपडामा पैराफिन क्रिमको मात्रा थियो । जसका कारण कपडाले तत्काल आगो समात्यो ।
उनकी छोरी कार्स्टनले भनिन् कि उनका पितालाई आमा कैथलिन तत्काल उनलाई बचाउन गइन् तर त्यतिबेलासम्म उनी धेरै जलिसकेका थिए । कार्स्टन भन्छिन्–मेरा पिता ओछ्यानमा कपडा बिना नै थिए, पसिनाले लतपथ र झुल्सिएको कपाल । हडबडमा उनले भने कि मलाई लागिरहेको छ जसै म स्वयमलाई आगो लगाए ।
आगो लाग्नुको कारण
तीन नातिनातिनाका हजुरबा ब्रायन एउटा जैज क्लव चलाउने गर्दथे । जब उनलाई अस्पताल लगियो तब उनको आधाभन्दा बढी शरीर चलिसकेको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
कार्स्टन भन्छिन् कि उनका परिवारलाई थोरै पनि आशंका थिएन कि आगो लाग्नुको कारण कपडा हो । उनी भन्छिन्–उनको क्रिमबाट अनजानमै आगो सल्काउने वस्तुमा परिवर्तन भयो । कस्लाई थाहा थियो कि यस्तो हुन सक्दछ ?
क्रिम निर्माताहरुलाई चेतावनी
गत वर्ष चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उत्पादनहरु नियमन गर्ने नियामक एजेन्सी (एमएचआरए)ले पनि सबै पैराफिनयुक्त क्रिम उत्पादन गर्ने उत्पादन कम्पनीहरुलाई सचेत गराएको थियो कि आगोको जोखिमको चेतावनी क्रिमको पैकेजिङमा प्रकाशन गर्न भनेको थियो ।
तर, एउटा जाँचका अनुसार बेलायतमा लाइसेन्स प्राप्त पैराफिन उत्पादनमध्ये सात उत्पादनको पैकेजिङमा मात्र यस्तो चेतावनी उल्लेख गरेको पाइएको थियो । बीबीसी हिन्दी
Previous post: राशिफल :२०७४ माघ २९ गते सोमबार !
Next post: नक्कली नेपाली तथा भारतीय रुपैयाँसहित दुई युवक पक्राउ